Bandhig dhaqameed lagu soo bandhigi doono dhaqanka, taariikhda iyo hiddaha Soomaalida… – Hagaag.com
Bandhig dhaqameed lagu soo bandhigi doono dhaqanka, taariikhda iyo hiddaha Soomaalida…
Posted on 30 Nofeembar 2018 by Admin in fanka // 0 Comments
Waxaa Magaalada Mandheera ee Waqooyi Bari dalka Kenya ka socda qabanqaabadii ugu dambeysay ee ku aaddan bandhigga Toddobaadka dhaqanka Soomaalida oo halkaasi ka dhici doona dhawaan.
Bandhig dhaqameedkan ayaa lagu marti qaaday dhammaan Bulshada ku hadasha Afka Soomaaliga ee degta Gobolka Geeska Africa, si ay halkaasi ugu debaal degaan isla markaana ugu muujiyaan hiddaha iyo dhaqanka Dadka Soomaaliyeed.
Madaxa Maamulka Waxbarashada iyo Dhaqanka Mandheera, Izzidun Cabdullaahi Cabdi ayaa sheegay inay qaban qaabadu marayso meel wanaagsan, isagoo intaa raaciyay inay sameeyeen qorshayaal ay ugu tala galeen inay munaasabaddu ku dhacdo jawi wanaagsan.
Mr; Cabdi ayaa sidoo kale sheegay inuu Bandhiggani u furan yahay dhammaan qaybaha kala duwan ee Bulshada ku hadasha Afka Soomaaliga si ay wax ugu bartaan dhaqankooda, Dalxiisayaasha iyo martida kaleba.
Guddoomiyaha Ismaamulka Mandheera, Cali Roba, ayaa sheegay inay Mandheera kusoo dhoweynayaan dhammaan Bulshada Soomaaliyeed ee ku nool Gobolka Geeska Afrika.
“Waxaan ku casuunnay Qof walba oo Soomaali ah, si uu u barto dhaqankeenna , taasina waxa ay xasuusin doontaa jiilalka cusub dhacdooyinkii Qarniyo hore, taas oo muhiim u ah ilaalinta hiddaha iyo dhaqankeenna ,” ayuu yiri Guddoomiyhu.
Munaasabaddan ayaa lagu soo bandhigi doonaa, Taariikhda Ummadda Soomaaliyeed, Sugaan kala duwan iyo Ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka.